Weerar kale oo ismiidaamin ah oo lagu qaaday dalka Indonesia iyo wararkii ugu dambeeyey - Caasimada Online
Home Dunida Weerar kale oo ismiidaamin ah oo lagu qaaday dalka Indonesia iyo wararkii...
Weerar kale oo ismiidaamin ah oo lagu qaaday dalka Indonesia iyo wararkii ugu dambeeyey
Surabaya (Caasimadda Online) – Laba qof oo saarnaa mooto ayaa weerar ismiidaamin ah ku qaaday xarun booliis oo ku taal magaalada Surabaya, maalin uun kadib markii ay mawjado qaraxyo ah oo dhimasho badan gaystay ay ka dheceen magaalo kutaal dalka Indonesia.
Saraakiil booliis ah ayaa lagu dhaawacay qaraxa, kaas oo dhacay 8:50 saacadda dalkaas, balse ma cadda tirada saxda ah ee dadka ku waxyeeloobay qaraxa.
Kooxda iskumagacawda Dawladda Islaamiga ah ayaa shegatay in ay ka dambaysay weeraradaas.
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa ku tilmaamay weerardaas kuwo fulaynimo ah oo biniaadanimada ka baxsan.
” Majiri doono wax gorgortan ah oo aan ka galayno ina aan tallaabo ka qaadno oo aan ka hortagno argagixisada” ayuu yiri madaxweyne Joko Widodo.
Wali lama hubo in weeraradani ay yihiin kuwo la xiriira qaraxyadii dadka badani ay ku dhinteen ee axaddii dhacay.
Afhayeen u hadlay booliiska bariga Java oo lagu magacaabo Frans Barung Mangera ayaa sheegay in aan wali lasoo saarin faahfaahin dhammaystiran oo la xiriirta dhacdadaan, asagoo sababta ku sheegay in ay wali baarayaan dadka halkaas ay waxyeelladu kasoooo gaartay.